Indlela uYesu ezoyise ngayo izilingo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
U Yesu woyisa njani izilingo. Kumlo ongumKristu usathana, eyona ndawo iphambili yedabi yi- isilingo. Umfundi kufuneka aloyise utshaba oluphepha izilingo. Nangona kunjalo, asisodwa. UYesu waba yindoda, wahendwa njengathi kwaye waphumelela uloyiso, ngaloo ndlela ebonisa singamoyisa njani uSathana?. Ke ngoko, kubalulekile ukuba siqwalasele ngenyameko indlela uYesu awazoyisa ngayo izilingo.
“Kungenxa yoko le nto kuye kwafuneka ukuba afane nabantakwabo kwinto yonke, abe ngumbingeleli omkhulu othembekileyo onenceba enkonzweni kaThixo, ukuze ahlawulele izono zabantu. Ngokuba ehendiwe yena ngokwakhe, unako ukubasiza abahendwayo.
"Kuba asinambingeleli mkhulu ungenako ukuvelana nezilwelwe zethu; ke, sinowahendwayo ngeento zonke, ngokufana nathi, engenasono."
Nangona uYesu walingwa izihlandlo eziliqela, wajamelana novavanyo oluqatha emva nje kokuba ebhaptiziwe. Njengoko sixelelwa nguMateo:
«Waza uYesu wakhokelelwa entlango nguMoya, ukuba ahendwe ngumtyholi. Emva kokuzila ukutya iintsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane ndilambile «
UMateyu 4: 1-2
Inyaniso yokuba yayinguMoya owamkhokelela uYesu entlango ibonisa ukuba UThixo wayefuna ukuba uYesu abe ngumntu kwaye alingwe. Ngoku siza kuchaza iinzame ezintathu zokuba uSathana alukuhle uYesu kwaye indlela uYesu awazoyisa ngayo izilingo.
1 Indlela uYesu aMoyisa ngayo izihendo: Intsingiselo yezihendo ezintathu
1.1 Isilingo sokuqala
1.2 Isilingo sesibini
1.3 Isihendo sesithathu ukuba uYesu woyisa njani ukulingwa
Indlela uYesu aMoyisa ngayo izihendo: Intsingiselo yezihendo ezintathu
"Ukuba unguNyana kaThixo, yithi la matye abe zizonka"
"Ukuba unguNyana kaThixo, yithi la matye abe zizonka" (Mateo Ngo-4: 3).
El usathana ngutitshala yezinto ezibonakala zisengqiqweni. UYesu wayelambile; yayinamandla okuguqula amatye abe zizonka. Inkqubo ye- diablo ngokulula Ucebise ukuba asebenzise eli lungelo ekhethekileyo ukuhlangabezana neemfuno zakho kwangoko.
Ngaba yayiyinyaniso into yokuba uYesu wayefuna ukutya ukuze aphile? Ungayifumana njani? Khumbula ukuba bekunjalo UThixo owamkhokelela kwintlango engenakutya. Umtyholi wacebisa uYesu ukuba azimele geqe kwaye azifumanele ezakhe iindlela zokuhlangabezana nezidingo zakhe. Ngaba uya kuthembela kuThixo okanye ngaba uya kuyondla ngendlela yakhe?
UYesu uza kubusebenzisa njani ubuchule anabo? Ngaba amandla amakhulu kaYesu angasetyenziswa njengesibane sika-Aladdin ukwanelisa iminqweno yakho? Isilingo yayikukuyibaxa amalungelo kaThixo akhe kunye nokunciphisa uxanduva kuluntu.. Kwaye oku kwakubalulekile, kuba icebo likaThixo yayikukuba uYesu ajongane nesilingo kwindawo yobuntu bakhe, esebenzisa kuphela izixhobo esinazo sonke.
Impendulo kaYesu: Indlela uYesu Ayoyisa Ngayo Izilingo
Kubhaliwe kwathiwa, Akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. (UMateyu 4: 4).
Kuvavanyo ngalunye, UYesu wajonga kwizibhalo, sisebenzisa iindlela esinokuthi sizisebenzise ukoyisa isilingo (ibhayibhile). Isicatshulwa osicaphuleyo besisesona silungileyo kuloo meko. Ngokomxholo, amaSirayeli afundile ebudeni beminyaka engama-40 entlango ukuba mabalinde kwaye bathembele eNkosini ngokutya, kwaye bangazami ukuza nezicwangciso zabo zokuzixhasa.
UMtyholi uhlasela ubuthathaka bethu. Akunazintloni ukubonisa ezona ndawo zethu zibuthathaka. Emva kokuzila ukutya kangangeentsuku ezingama-40, uYesu walamba. Yiyo loo nto isilingo sokwenza ukutya kungagunyaziswanga. USathana ukhetha isilingo esisesichengeni sokufumana ngoku. Ngapha koko, izilingo zihlala zihambelana nokubandezeleka okanye iminqweno yenyama.
Isilingo sibonakala sisengqiqweni. Into ephosakeleyo ihlala iziva ilungile. Indoda "kufuneka itye." Abantu abaninzi banoluvo lokuba iimfuno zobuqu ziyabakhulula kuxanduva lwabo lokuthobela imithetho kaThixo.
Kufuneka sithembele kuThixo. UYesu wayefuna ukutya, ewe. Kodwa ngaphezulu koko, wayefuna ukwenza ukuthanda kukaYise. Kuhlala kulungile ukwenza okulungileyo kwaye kuhlala kungalunganga ukwenza okungalunganga. UThixo uyakubonelela ngento ayikholelwa ngcono; Umsebenzi wam kukuthobela. Kubhetele ukulamba kunokuba ungamkholisi uNdikhoyo.
Emva koko usathana wamsa kwisiXeko esiNgcwele, wambeka inqaba Waphuma etempileni, wathi kuye, Ukuba ungunyana kaThixo, ziphose phantsi; kuba kubhaliwe kwathiwa, Iingelosi zakhe ziya kuthunyelwa kuwe, zikugcine. baya kukubamba ngesandla, hleze ukhubeke elityeni. ”(Mateyu 4: 5-6).
UYesu waseNazarete Wayephendule kwisilingo sangaphambili esithi uyalithemba lonke ilizwi leNkosi. Apha uSathana uthi, “Ewe, ukuba uthembele kuThixo kakhulu, zama. Jonga inkqubo kwaye ubone ukuba iyakukhathalela. Kwaye waqinisekisa ukulingwa ngesicatshulwa.
Ngaba uYesu uza kuthembela ngaphandle kokuzama, kuba uThixo ethembise ukumkhusela engozini?
Ngaba kulungile ukudala ingozi, ukubona nje ukuba uThixo uya kuyenza le nto ayithethayo?
Kubhaliwe kanjalo kwathiwa, Uze ungayihendahendi iNkosi uThixo wakho. (UMateyu 4: 7).
Ukuzithemba okwenyani kuyalamkela ilizwi likaThixo kwaye akufuneki kungqinisise.
UMtyholi ucaphula isibhalo; ubeka iivesi zeBhayibhile njengesithiyelo kwihhuku lakhe. Abantu bahlala bevuma nayiphi na imfundiso ukuba ihamba kunye neendinyana ezininzi. Kodwa lumka! enjalo umtyholi onokuziguqula njengengelosi yasezulwini ngokuqinisekileyo ungazichaza kakubi iZibhalo ngeenjongo zakho. Inkqubo ye- usathana wenza iimpazamo ezintathu: Okokuqala, Akazange azithathe zonke iZibhalo. UYesu waphendula wathi: "Kubhaliwe kwathiwa." Inyani sisambuku sayo yonke into ayithethayo uThixo; Ke kufuneka sifunde zonke iimfundiso zeZibhalo ngesihloko esinikiweyo ukuze sazi ngokwenyani ukuthanda kukaThixo. Kwindawo yesibini, wasikhupha isicatshulwa ngokomxholo. INdumiso 91, ngokomxholo, ithuthuzela umntu othembele kwaye axhomekeke eNkosini; Kwindoda evayo isidingo sokuvavanya iNkosi, akukho nto ithenjisiweyo apha. Isithathu, USathana wasebenzisa ibinzana lokomfuziselo ngokoqobo. Ngokomxholo, inqaku lalingelilo ukhuseleko ngokwasemzimbeni, kodwa ngokwasemoyeni.
USathana ubhetyebhetye. UYesu uphumelele kwenye indawo, ke umtyholi wafudukela kwenye. Simele sihlale silumkile.
Itrust ayizami ukufuna ubungqina obungaphezulu. Ngenxa yobungqina obuninzi obuthiwe thaca nguThixo, kubi ukucela uThixo ukuba enze enye into ukubonisa ukubaluleka kwakho.
Isilingo sesithathu Indlela uYesu Ayoyisa Ngayo Izilingo
UMtyholi wamthabatha wamsa entabeni ende kakhulu, wambonisa zonke izikumkani zehlabathi, nozuko lwazo; wathi kuye, Konke oku ndokunika, ukuba uthe waqubuda kum.
"Kwaye i diablo Wamsa entabeni ephakame kakhulu, wambonisa zonke izikumkani zehlabathi, nozuko lwazo; wathi, Konke oku ndokunika, ukuba uthe waqubuda kum.
(UMateyu 4: 8-9).
Kwesi silingo, umtyholi wamangaliswa yinto eyoyikisayo yokulawula phezu kwazo zonke izikumkani zehlabathi.
Ingxaki apha yayingeyonto yokuba uYesu abe ngukumkani, kodwa njani kwaye nini. INkosi yathembisa uNyana ukuba uya kulawula emva kokubandezeleka kwakhe. I umtyholi wanikela ngendlela emfutshane: isithsaba ngaphandle komnqamlezo. Unako ukulawula zonke izikumkani zehlabathi aze azinikele kuYise, kodwa ngoku, ubukumkani buya kuba bungcolileyo.
Ke imibuzo yile:
UYesu wayeza kuba ngukumkani njani?
Ngaba ungayisebenzisa indlela engalunganga kwaye, ekugqibeleni, ukufezekisa okuhle?
Suka ume, Sathana; kuba kubhaliwe kwathiwa, YiNkosi uThixo wakho oya kuqubuda kuyo, ukhonze yona yodwa. (UMateyu 4:10).
Akukho nto ilungileyo ukuba yaphula iZibhalo.
USathana wenza nantoni na ayifunayo. UMtyholi wanikela ngayo yonke into ukuba "athenge" uYesu. Ukuba kukho ixabiso apho ungamthobeli khona uThixo, unokulindela ukuba usathana eze aze ahlawule.
UMtyholi unika iindlela ezimfutshane. Inika eyona ndlela ilula kunye nesigqibo esigqibeleleyo samandla kunye noloyiso. UYesu akavumanga indlela emfutshane yokufumana ubukumkani ngendlela uYise awayezimisele ngayo. Namhlanje USathana uhenda iicawe ukuba zithathe iindlela ezimfutshane zokufumana amandla nokuguqula abantu. Indlela kaThixo kukuguqula ngokufundisa iindaba ezilungileyo. Kanye njengoko wahenda uYesu ukuba onakalise umsebenzi wakhe kwaye afumane amandla ngeendlela zenyama, ke uzama ezi ntsuku nathi sonke.
Umtyholi unikezela ukulungelelanisa ngeenjongo ezilungileyo. Ngcamla ubunzulu bokusulungeka kwethu. Nathi izilingo zokusebenzisa kakubi izibhalo ukuxhasa inqaku elilungileyo o thetha ubuxoki ukufezekisa iziphumo ezilungileyo. Ayilunganga ukwenza into engalunganga.
Njengoko ubona, u-Yesu uphumelele uloyiso kwisigqibo esibi kwaye wasibonisa indlela eyiyo yokoyisa izilingo:
Ndikholose ngoThixo (1 Yohane 5: 4; Kwabase-Efese 6:16).
Wasebenzisa izibhalo (1 Yohane 2:14; Kolose 3:16).
Wamelana nomtyholi (Yakobi 4: 7; 1 Petros 5: 9).
Kunjalo indlela uYesu awazoyisa ngayo izilingo. Sinokulandela kuphela emanyathelweni abo.
Kube njalo! Siyathemba ukuba uyayiqonda indlela u Yesu awoyise ngayo uhendo kwaye ufuzisela ntoni na eBhayibhileni. Ukuze uqhubeke ufunda ngakumbi ngoYesu kunye nobuntu bakhe, sicebisa ukuba ufunde: Kutheni uYesu ethetha ngemizekeliso.